Inkonjane FM: abasebenzi balwa nesihluku sobungxowankulu obufufusayo
Bukhulu ubunzima obubhekene nabasebenzi baseNkonjane FM okuyisiteshi somsakazo esasungulwa ngo2009 eFlagstaff ukuze sibhekelele abantu abangamaMpondo eMpuma Koloni. Abasebenzi bahola uR1000 ngenyanga, kepha ziyaphela izinyanga amaholo engatholakalanga. Sekukaningi abasebenzi bezama ukukhulumisana nomqashi kepha kufane kokuthela amanzi emhlane wedada. Kusukela ngoMay 2011, abasebenzi abakaze bahole. Lokhu kuze kwaba nomthelela wenxushunxushu eqhubekayo phakathi kwabasebenzi kanye nophethe isihlalo seBhodi, uMwelo Nonkonyana.
Ukumiswa kanye nesinqumo senkantolo
Nonkonyana – uyiNkosi futhi abeyilunga lePhalamende elimele iANC – uzimisele ukuxazulula inkinga ngezindlela zokujezisa ezinesihluku.
Emuva kokubona ukuthi izikhalo ziwela emadlebeni angezwa njengoba umqashi engafuni ukunikezela ngezimfuno zabo, abasebenzi bathatha isinqumo sokwehlisa izinga lokusebenza. UNonkonyana wabe eseyalela ukuthi abasebenzi baye phambi kwekomidi eliqondisa izigwegwe ngomhla ka 4 December 2011. Ngokukhulu ubuhlaza yena akazange afike. Wahamba waya enkantolo lapho wathola isinqumo senkontolo ukuba abasebenzi akufanele bavunyelwe ukungena lapho kusetshenzelwa khona, futhi kufanele bavele ngaphambi kweMantshi basho ukuthi yinindaba kufanele bangaxoshwa emsebenzini, futhi batshelwe ukuthi mabakhokhele zonke izindleko. Sinjalo- ke isihluku esenziwa yisigaba sobungxowankulu esifufusayo sabantu abamnyama abakhulwa emaketangeni obandlululo yisigaba sabasebenzi!
Abasebenzi balulekwa yiCOSAWU ngokuthi inkantolo kaMantshi ayinalo ilungelo lokuthetha leli cala. Kepha inkantalo yaqhubeka nesinqumo sokuvimbela abasebenzi ukuthi bangene emsebenzini ngenxa yokuthi bangenelela isiteleka esingekho emthethweni kusho iNkosi- Eqinisweni okuwukuxoshwa okuncike ematemini omthetho.
Ngokomthetho oyingxenye ka 68 no 157 we Labour Relations Act inkantolo kaMantshi ayinalo ilungelo lokukhuluma ngeziteleka. INkosi ithi abasebenzi “emuva kokumiswa, bangena bahlala ngenkani estudo sommangali”. Ngokuphazima kweso, abasebenzi abangenela isiteleka sebebonwa njengababehlose impi, asebenze icala elifanelwe wudilikajele, ubumpofu kanye nokungabi nemisebenzi.
Icala selihlehliswe kane (kuze kube wumhla ka 30 April). Kubonakala kungathi amajaji akafuni ukukhipha umyalelo wenkantolo ngoba bazophoqeleka ukuvuma ukuthi icala lingaphezulu kwamandla abo. Amajaji amabili ayeshintshana ngesikhathi kuhlehliswa icala futhi babesho izizathu eziyizeleze; omunye wathi ngeke aqhubeke necala ngoba uwuphathini kammeli womqashi.
Ibhodi elingekho emthethweni
Ngesikhathi abasebenzi bebhalele iNational Community Radio-station (NCRF) ukuze baphakamise izikhalo zenkohlakalo zesiteshi, yaphendula ngokukhomba izinto eziningi ezingahambi kahle. Umfanekiso wukuthi iBhodi alizange libenomhlangano njengokusho komthetho-sisekelo, umhlangano omkhulu (AGM) awuzange wenzeke eside isikhathi, umphathisihlalo uwusopolitiki kanye nelunga lePhalamende, njengoba namanye amalunga eBhodi ayengamalunga ePhalamende futhi ewosopolitiki.
Akusibona abasebenzi abanephutha, kepha wumqashi. UNonkonyana uphethe isiteshi ngokuziqhenya ngenxa yeBhodi aliphethe elingekho emthethweni. Yena eyedwa wanqaba ukukhokhela abasebenzi wase ebafaka icala. Ukhetha iphela emasini ekucindezeleni abasebenzi. Ngaphandle kokunika incazelo wafaka abasebenzi abawu-12 kwabawu-26 icala; kepha bonke bathatha isinqumo sokungenelela ukusebenza isikhathi esincane. Amanye amalunga amvuna, kuyinto eyaziwayo ukuthi iNkosi uNonkonyana usatshwa yizifundiswa zendawo ngenxa yokuziphatha njengomcindezeli.
Abaholi bomphakathi wase-Inkonjane FM banyanyiswa yindlela isiteshi esiphethwe ngayo nangendlela abasebenzi bephethwe ngayo. Sekubhalelwe iNCRF itshelwa ukuthi ayingenelele ekuxazululeni inkinga. Kufunakala umbiko wezezimali ohloliwe; akufanele ukuthi ilunga leBhodi libe yilunga lenhlangano yepolitiki; kufanele kuphele nokwenzelelana kanye nokubeka ukungeneliseki ngokumiswa kwabasebenzi nokuthi udaba selusenkantolo ngaphandle kolwazi lomphakathi.
Amalunga omphakathi afuna umhlangano osheshayo noMnyango weZokuxhumana kanye nezinhlangano ezingaphansi kwawo, iBhodi le-Inkonjane FM kanye nabasebenzi abamisiwe. Uma isixazululo singekho umphakathi uzimisele ukwenza amalungiselelo emashi.
I-Democratic Socialist Movement (DSM) kanye neCosawu baseka abasebenzi abaxoshiwe kanye nokungenelela komphakathi. Izinkinga ezibhekene nabasebenzi base-Inkonjane zikhombisa ubuthakathaka bobungxowankulu obufufusayo, obushintsha impahla ekufanele kube eyomphakathi kepha igcine sekungeyomuntu oyedwa. “Ubulungiswa” bobungxowankulu buyihlazo elihlezi obala, ukubumbana komphakathi kuyagqugquzela. Kepha isixazululo esiyohlala isikhathi eside ukuthi kufanele kube noshintsho emphakathini, kususwe ubungxowankulu kufakwe ubudlelandawonye.